अन्योलमा शिक्षाः नीति छन् नियम छैनन्, अलमलै अलमल ! - Baikalpikkhabar
अन्योलमा शिक्षाः नीति छन् नियम छैनन्, अलमलै अलमल !
समयमै संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका शिक्षा इकाइहरूको कार्य सञ्चालनमा अलमल देखिएको छ । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जसअनुसार आगामी १० चैतदेखि शुरू हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । अहिले उत्तरपुस्तिका छपाइ प्रदेशले गरिरहेको छ भने प्रश्नपत्र संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छापिरहेको छ ।
बुधबार, ०८ फागुन, २०७५, बिहानको ०८:५८ बजे